Ndiri mukomana ane makore 27 | Kwayedza
Ndiri mukomana ane makore 27
03 Oct, 2014 - 09:10	 2014-10-02T15:10:35+00:00 2014-10-03T09:00:21+00:00 0 Views
MAKADINI veKwayedza? Ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 28 – 35 ane mwana 1 kana asina. Ini ndine makore 40 nevana vaviri, vanotamba tambirai kure. Nhare dzangu 0772 315 680.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 24. Anokwanisa kundibata pa0778 454 877.
Ndiri madzibaba wechishano ane makore 40 nevana vatatu uye ndinotsvagawo mukadzi ane vana kana asina achipindawo masowe. Ngaave anoshanda muHurumende, ari positive, asingabvi kuMasvingo. Makore 35 zvichikwira, vanoda zvekutamba kwete. Nhamba dzangu 0733 837 710.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndiri kutsvaka musikana ane makore 18-20. Ndinoshanda uye ndiri kuda ari pachokwadi nekuti ndanzwa nekunyeperwa. Ndibatei pa0771 899 827.
Ndiri mudzimai ane makore 21 nemwana mumwe chete ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi. Anoda ngaandibate pa0733 844 139.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume wekuchembedzana naye akavimbika ane makore 44 kusvika 60 anonamata, anogeza uye ari HIV positive. Ndibatei pa0779 132 605.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinodawo musikana ane mari yake anodawo hake kupihwa rudo neni. Chekutanga kunoongororwa ropa, anenge andifarira nhamba dzangu 0779 730 382.
Ini ndiri murume ane makore 30 ndinodawo mukadzi ane makore 25-28. Anoda nezvangu anofona pa0733 948 665 kana paWhatsApp.
Ndiri murume ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 20 asi anofanira kunge asina utachiona hweHIV nokuti ndiri mutano. Anoda ngaandifonere pa0777 674 810.
Ndinotsvagawo mudzimai akarongeka anoshanda, kunyanya muHurumende. Vandinowana vazhinji vanenge vasina kurongeka saka ndingafara ndakamuwana. Anoda anofona pa0777 032 253.
Ndinodawo musikana ane makore 18 – 22 ari positive. Ini ndine makore 27, vanoda fonai pa0717 347 966, kunyanya vemuHarare neKwekwe.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 2 ndinoshanda uye handirwari. Ndinotsvakawo murume asina mukadzi anoshandawo seni, anoenda kuchechi ane makore 36 – 40. Akazvipira kuenda kunotorwa ropa ngaandibate pa0712 548 407.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 anoda kuti tironge ramangwana redu. Anoda ngaandibate pa0778 911 360 kana paWhatsApp.
Ndinotenda veKwayedza nechirongwa chenyu cheTishamwaridzane, ndakawana wangu wandaida. Vose vaifona panhamba idzi 0734 405 835 chiregai zvenyu.
Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1 ndiri kutsvagawo murume ane makore 25 – 30 ari pachokwadi. Ndibatei pa0717 463 776.
Ndiri musikana ane makore 18 ndiri kutsvagawo shamwari (penpals) dzechisikana. Vakasununguka ngavatumire masms pa0782 130 281.
Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora mukobvu, munaku, mutendi, ane makore 18 -33 uye anoda zvemusha ane mwana mumwe kana vaviri. Ini ndine makore 46 ana vaviri. Ndinonzi Patrick, vanoda ndibatei pa0714 230 775.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21 ari pachokwadi chokuda kuroorwa neni uye akanaka seniwo. Ane tsika ngaandifonere pa0782 290 998.
Ndiri mudzimai ane makore 45 ndinotsvakawo shamwarirume yakavimbi­ka ine makore 50 zvichikwira asi handidi anonetsa uye vana vadiki musafone. Nhamba dzangu 0733 135 489.
Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 23 kusvika 36. Ndinoda anobva kuMadziva, Murehwa, Rushinga, Chiweshe kana kwaNyava kwaMusana. Ndibatei pa0715 333 187.
Ndiri murume ane makore 29 ndinodawo mukadzi ane makore 20-25 ari pachokwadi. Anoda ngaandibate pa0774 547 478, ndiri muHarare.
Ndiri mukomana ane makore makumi maviri nemashanu ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore ari pasi peangu, chero ane mwana mumwe chete. Nhare dzangu 0713 926 369.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvakawo musikana wokuroora ane makore 20 zvichidzika. Ndinobatika pa+27 784 455 171, ndinoda ari pachokwadi anotya Mwari.
Ndiri mukomana ane makore 32 ndiri kutsvagawo musikana wokuroora akavimbika ane makore 18 kusvika 25. Anoda zvekuroorwa ngaandifonere pa0771 824 006, macall me back kwete.
Ndiri murume ane makore 43 ndinoda mukadzi ane makore 20 kusvika 40 ari kuda imba kwete kunditambisira nguva. Macall back, kubhipa nevakadzi vevanhu kwete. Nhare dzangu 0772 512 708.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 21, ndinoshanda kuSouth Africa. Vanoda fonai pa0783 695 766.
Ndiri mudzimai ane makore 44 ekuberekwa ndiri HIV positive uye ndiri kudawo murume ane makore 46 kusvika 60 anoda kuti tichengetane. Vanoda ndibatei pa0772 254 776.
Makadini veKwayedza? Ndinotsvagawo musikana akavimbika ava kuda zvemba ane makore 24 zvichidzika chero ane mwana 1. Ini ndine mwana 1, anoda anondibata pa0734 341 314 .
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 20 ndiri kutsvagawo mukomana ane makore 22 kusvika 25 asina utachiona hweHIV. Ngaave ari mushandi weHurumende ari pachokwadi, nhare dzangu 0779 466 893.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 44 ekuberekwa ndiri HIV positive uye ndiri kudawo murume ane makore 46 kusvika 60 anoda kuti chengetane ari pachokwadi. Ndaneta nematsotsi, vakaroora kwete. Anoda ngaandibate pa0772 254 776.
Ndiri murume ane makore 31 ndiri kutsvaga musikakana kana mudzimai ane makore 18 kusvika 30. Nhamba dzangu 0783 910 035.
Ndiri mukomana ane makore 21, HIV negative uye ndiri kutsvagawo musikana akanaka ane rudo, anoendawo kuchechi ane makore 19 kusvika 21. Afadzwa neni ngaafone kana kundibata paWhatsApp pa0777 058 586.
Ndiri mudzimai ane makore 44 ndiri kutsvagawo murume ane makore 48 zvichienda mberi. Anoda zvemba ngaandibate pa0774 429 334.
Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba ane makore 25 kusvika 29. Anoda ndibate pa0715 888 640, HIV negative asi macall me back kwete.
Ndiri murume ane makore 35 nemwana mumwe chete, HIV negative uye handinwe doro. Ndiri kutsvagawo mukadzi ari pachokwadi ane mwana mumwe kana asina ane makore 22 – 32, anozvishandira. Anoda ngaafone pa0777 182 702.
Ini ndine makore 31 ndiri kutsvaka mukadzi wekuroora ane makore 27 zvichidzika. Ngaandibate pa0733 643 613.
Ndinotenda nechirongwa chenyu ndakamuwana wandinoda saka vose vachiri kufona pa0771 395 489 chiregai zvenyu.
Makadii veKwayedza? Ini ndine makore 19 nemwana 1 ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 22 – 28 anoshanda semuuto kana mupurisa. Anoda anondibata pa0717 226 271.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27 nemwana mumwe chete ndiri kudawo mukadzi ane mwana mumwe chete ane makore 18 kusvika 25 ane rudo. Andifarira nhare dzangu 0733 616 807.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinoda musikana ane makore 25 zvichidzika asi ane mwana kwete. Ndine musha wangu anondida anondibata pa0783 796 296, ngaave akazvipira kunotorwa ropa.
Ini ndiri musikana ane makore 23, pachimiro ndiri mutete mushava uye ndinotsvakawo mukomana kana murume akamboroora kana asina ane mwana 1 kana asina. Ini handina mwana zvangu, ndinoda ari pachokwadi nekuti ndiri nherera vabereki vangu vose vakafa. Nhamba dzangu 0783 215 807 kana paWhatsApp ndiripo.